Izindaba - I-China yiyona ehamba phambili ngokuthumela izimpahla ngaphandle kwezimoto emhlabeni
I-China inezimoto ezingaphezu kwezigidi ezingama-300 ezibhalisiwe futhi kugxilwe kakhulu ezimotweni ezizayo zikagesi nezizimele, izwe lizoba ngumthengisi wezimoto omkhulu kunabo bonke emhlabeni ngaphambili.
Ngokugxila okwandayo kuma-EV nezimoto ezizimele, iChina izoba ngumthengisi wezimoto omkhulu kunabo bonke emhlabeni.
ENew Delhi: I-China njengamanje iyimakethe enkulu kunazo zonke yezimoto futhi bonke abakhiqizi bezimoto abakhulu emhlabeni wonke banesifiso sokubamba isigaxa esikhulu sikaphayi wemakethe lapho. Ngaphandle kwezimoto ezinikwe amandla yi-ICE, futhi imakethe enkulu kakhulu yezimoto ezisebenza ngogesi.
Okwamanje iChina inezimoto ezingaphezu kwezigidi ezingama-300 ezibhalisiwe. Lokhu kungaba yiqoqo lezimoto elisetshenzisiwe elikhulu kunawo wonke emhlabeni kungekudala.
Umbiko wabezindaba uthi inkampani yaseChina eseGuangzhou isanda kuthumela izimoto ezingama-300 ezisetshenzisiwe kubathengi emazweni afana neCambodia, Nigeria, Myanmar kanye neRussia.
Lokhu kube ukuthunyelwa kokuqala okunjalo ezweni njengoba bekuvimbe ukuthunyelwa okukhulu kwezimoto ezinabanikazi bezimoto ezithengiswayo kwamanye amazwe ngokwesaba ukuthi izinga elibi lingalimaza isithunzi sazo. Futhi, kuzoba nokuthunyelwa okuningi okunje kungekudala.
Manje, ngesitoko esikhulayo sezimoto ezisetshenzisiwe, izwe lihlose ukuthengisa lezi zimoto kulawo mazwe lapho izinkambiso zokuphepha nezokungcoliswa zithambile. Izinga elithuthukisiwe lezimoto zaseChina kunakuqala lidlala enye indima ngemuva kwaleli qhinga.
Imakethe yezimoto esetshenzisiwe yingxenye entsha lapho abakhiqizi bezimoto abaningana bezama ukuthola inhlanhla yabo. Emazweni athuthukile, kuthengiswa izimoto ezisetshenzisiwe ezingaphezu kokuphindwe kabili kunezintsha.
Isibonelo, emakethe yase-US, kuthengiswe izimoto ezintsha eziyizigidi eziyi-17.2 ngo-2018 uma kuqhathaniswa nezingu-40.2 million ezisetshenzisiwe kanti leligebe kulindeleke ukuthi likhule ngo-2019.
Intengo ekhuphuka njalo yezimoto ezintsha kanye nenani elikhulu lezimoto ezisetshenzisiwe ezivela ekuqashisweni kuzoshayela imakethe yezimoto ezinabanikazi bayo ukukhuphuka kaningi kungekudala.
Amazwe athuthukile afana ne-US neJapan asevele athumele izimoto zawo asezisebenzisile emazweni asathuthuka afana neMexico, iNigeria amashumi eminyaka.
Manje, iChina kulindeleke ukuthi ithathe isikhundla esiphambili ekuthekeliseni izimoto ezisetshenzisiwe kwamanye amazwe, lapho izidingo ziphezulu kwezinye izindlela ezingabizi kakhulu kunamamodeli amasha anentengo.
Ngo-2018, iChina ithengise izimoto ezintsha eziyizigidi ezingama-28 kanye nezicishe zazizigidi eziyi-14 ezisetshenzisiwe. Isilinganiso kulindeleke ukuthi sidlule ngokushesha futhi hhayi kude isikhathi lapho lezi zimoto zizothunyelwa kwamanye amazwe, ziqhutshwa wushintsho lukahulumeni waseChina olubhekise ezimotweni ezikhiqiza uziro.
Futhi, lokhu kuhamba kuzothuthukisa imboni yezimoto yaseChina, okumanje isenkingeni. Njengoba abenzi bezinqubomgomo bezimisele ukukhulisa imboni kanye nomkhakha waseChina, ukuthumela izimoto ezingaphambi kwazo emazweni ase-Afrika, amanye amazwe ase-Asia naseLatin America kungaba yindlela entsha.